I-Huawei MateView: Isigcini seprimiyamu esiphucula imveliso yakho | Iindaba zeGajethi
IHuawei iyaqhubeka nokwandisa uluhlu lwayo lweemveliso zabathengi ngeendlela ezahlukeneyo, kutsha nje sikuxelele ukuba ungayiphucula njani ukusebenza kwenethiwekhi yakho yasekhaya yeWiFi kunye neeRouters zakho, kwaye uyazi kakuhle ukwaziswa kwabo kutshanje ngokweewotshi ezifanelekileyo. Namhlanje sigxile koku kude kube ngoku kubonakala ngathi yindawo engaziwayo kwinkampani yaseAsia.
Sihlalutya nzulu iHuawei MateView, ukubeka esweni ukuba ngenxa yefomathi, uyilo kunye neempawu zikuvumela ukuba uphucule imveliso yakho kweyona "ndlela iphambili". Fumanisa nathi onke amanqaku eHuawei MateView kwaye kutheni iye yaba yenye yezona zinto zibeka esweni imarike.
1 Izixhobo kunye noyilo: Indlela kaHuawei yeyona ilungileyo
3 Unxibelelwano kunye nemveliso zihamba kunye
4 Sebenzisa amava ukuthelekisa kwiimeko ezininzi
Izixhobo kunye noyilo: Indlela kaHuawei yeyona ilungileyo
Isuphavayiza ithi okuninzi malunga "nokuseta", eyaziwa nguHuawei kwaye ufuna ukujonga onke amehlo kuyo. Isuphavayiza inoyilo oluncinci kunye nezixhobo "zepremiyamu" ukunyuka kulo msitho. Ukunyaniseka, uya kuchitha uninzi lwemihla yakho ujonge esi sixhobo, kutheni ungayili enye intle ngokwenene? Ndingatsho ngokungenazintloni ukuba sijamelene noyilo lweshishini oko jonga kwi-iMac ye-Apple, into enokuthi ibekwe ziimpawu ezimbalwa kwimidlalo yazo. Ungayithenga ngexabiso elimangalisayo ngokuthe ngqo kwiAmazon.
Ubungakanani: 28,2 intshi
Isiseko: Uhlengahlengiso lobude beemilimitha ezili-110 kunye nokuthambekela phakathi -5º kunye + 18º
umbala: I-aluminium ebrashiweyo
Inengalo eyakhiwe kakuhle eqhotyoshelwe esweni ngenkxaso eyingqukuva ejikelezayo kunye neselfowuni ukuphakama, ihlala ikwisalathiso esime nkqo, ewe. Kule kholamu uyakufumana inkqubo yesandi yestereo esiza kuthetha ngayo kamva, kunye nonxibelelwano kunye nokutshaja amazibuko, i-ode yokwenyani kubuncinci, ukudityaniswa kunye nobuhle. Khange sikwazi ukufikelela kulwazi ngokubhekisele kubunzima bemveliso, kodwa kwiimvavanyo zethu sifumanise ukuba njengesixhobo esihle esisebenzisa izixhobo "zepremiyamu", inobunzima obukhulu. Ukusetyenziswa kwescreen yi-94%, engqina umsebenzi owenziweyo malunga noku.
Siphambi kwepaneli I-LCD-IPS enomlinganiso we-3: 2, Njengazo zonke iikhompyuter kunye neetafile zikaHuawei. Lo mlinganiso wenqaku uye watshabhiswa ngokuhamba kwexesha ukunika ukubonakaliswa kwescreen esibanzi, kodwa yenza ingqiqo enkulu kwinqanaba lokuvelisa kwakhona, siza kugxila kulo kamva.
Sinee-intshi ezingama-28,2 kwisisombululo se-4K + (3.840 x 2.560) edibanisa itekhnoloji I-HDR400, oku usebenzisa i Iingcebiso ezingama-500 zokuqaqamba, ngaphezulu komgangatho wentengiso wolu hlobo lwepaneli. Sinemilinganiselo yokuhlaziya "kuphela" 60 Hz okusikhumbuza ukuba sijamelene nokubeka iliso kugxilwe kwimveliso, kunye nomyinge we 1.200: 1 umahluko.
Sine-98% DCI-P3 yombala we-gamut kunye ne-100% ye-sRGB, efanelekileyo ifoto kunye nokuhlelwa kwevidiyo, ukubonelela nge-1.070 yezigidigidi zemibala ngokuchaneka okuphezulu kwe-E <2. Iphaneli ibonakalise ii-angles ezibalaseleyo zovavanyo kuvavanyo lwethu kunye nokuqaqamba okusikhumbuza ngokukhawuleza ukuba le yimveliso engaphezulu komndilili, iyonwabisa ngeVESA-eqinisekisiweyo ye-HDR400, ethi yona iwele inotshi engezantsi kwemigangatho ye-HDR10.
Unxibelelwano kunye nemveliso zihamba kunye
Kwicala lasekunene siza kufumana eyona iphambili «IHUB» eya kuthi isinike amazibuko amabini e-USB-A ubume bobugcisa, izibuko I-DisplayPort ye-USB-C iyahambelana nokutshaja ukuya kuthi ga kwi-65W kunye jack yomsindo oxubeneyo (Ukuvumela igalelo kunye nemveliso) ye-3,5mm. Nangona kunjalo, ayizizo zonke izinto ezishiyekileyo apha, ngasemva yeyokungena kwamandla e-USB-C ebonelela ngamandla ngesixhobo ukuya kuthi ga kwi-135W, sikhatshwa yiklasikhi I-Mini DisplayPort kunye ne-HDMI 2.0 port.
Iimakrofoni ezimbini ezakhelweyo zithatha iaudio stereo ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-4, ziluncedo ekunxibelelaneni nabancedisi bokwenyani, ukuhlela ividiyo, kunye neefowuni zenkomfa.
Ngale ndlela sinokusebenzisa ithuba lokusebenzisa izibuko elinye le-USB-C njengolwandiso lwecompyuter yethu, kwangaxeshanye iyayibiza kwaye iyidibanise necala layo leHUB. Ayisiyiyo yonke into esele apha, kuba iHuawei ifuna ukuvala amava e-MateView yayo ngokwenza ukuba ihambelane neetekhnoloji zayo ezininzi ezenziwa kwizixhobo zohlobo lwentengiso:
Ukudlala ngaphandle kwamacingo kunye nokuqikelela
Unxibelelwano olungenantambo kunye nolwandiso lwe desktop ngokuzisa ifowuni yakho kufutshane nesiseko
Ukwenza oku, Inguqulelo ngonxibelelwano olungenazingcingo isebenzisa ikhadi lenethiwekhi le-WiFi kunye neBluetooth 5.1, Nangona kunjalo, ingqikelelo ngentambo ye-USB-C iyasebenza kuzo zonke iinguqulelo.
Sebenzisa amava ukuthelekisa kwiimeko ezininzi
Siqala nge "multimedia", nangona iyakuba yinto enqabileyo kwezi ntsuku ukubonisa umxholo kwiscreen esinombandela, isonjululwe ngamabhanti amnyama phezulu nasezantsi. Kwinxalenye yayo, ukuba ne-HDR400 kunye nokuqaqamba okuqhelekileyo kwe-500 nits kusimema ukuba sibukele uthotho, iYouTube, iTwitch okanye umboneleli wethu esimthandayo. Ukujikeleza amava IHuawei inyuse izithethi ezimbini ze-5W kwisiseko seMateView enikezela isandi sestiriyo esinendawo yokunyusa isiseko kunye ne-DSP yokulinganisa ezizimeleyo, isiphumo: Elinye lamava amahle esibe nawo kwinqanaba lesandi ekubekweni esweni kwezi mpawu.
Ukunxibelelana nokubekwa kweliso kunye nokujongana kwayo nomsebenzisi ngendlela enobuchule esinayo Ibha yokuthinta ezantsi kwe-bezel uHuawei ayibize ngokuba yi-SmartBar, Le inomdla wokufunda onomdla, kodwa nje ukuba uyiqhela, kukuchukumisa okuhle kwisixhobo:
Impompo enye> Qinisekisa
Iitephu ezimbini> Buyela
Umthamo wolawulo> Swayipha umnwe omnye
Guqula igalelo> Swayipha ngeminwe emibini
Ngaphandle koko, Ndifumene ukulinganiswa kombala kuyamangalisa, ikuvumela ukuba uhlele ividiyo kunye neefoto ezineziphumo ezilungileyo, ukongeza, Ukuhanjiswa kwayo okungu-3: 2 kuphucula imveliso ngenxa yoyilo lweefestile kunye nolwazi olunikezwe kuzo. Ukusebenza kwisohlo esinye, iphaneli yepanoramic (ngaphandle kokuba yi-UltraWide) isongela uyilo lweewindows kwaye ayisiyiyo eyona ndlela ifanelekileyo xa usebenza. Ukubuya kwecandelo le-3: 2 kuzise uncumo kuthi thina basebenzisa abahloli ukuba basebenze ngokuqhubekayo.
Oku kubekwa esweni kweHuawei kudibanisa uyilo, umgangatho kunye nezinto ezahlukileyo zonxibelelwano ezongeze ixabiso xa uchitha iiyure ezinde edesikeni yakho. Ubungqongqo bokuzisa i-3: 2 ngaphandle kokuhlambalaza kunye nokubheja kuyilo oluncinci kwenza oku kubek 'esweni enye yeendlela zokuqala phakathi / kwindawo ephezulu yentengiso. Ngokucacileyo, ihamba ngokuthe ngqo kude necandelo le "gaimng" apho iHuawei sele inikezela enye indlela yayo ngeMateView GT, kwaye ngaphandle koku, inentsebenzo ebalaseleyo ekusetyenzisweni komxholo wokumanyelwayo. Amaxabiso alo aphakathi kwe- € 599 yohlobo oluqhelekileyo kunye ne- € 649 yenguqulo eqikelelweyo ngaphandle kwentambo, usebenzisa ezinye iimonitha ezibonakala zifana ephepheni, kodwa kungabonakali kwiligi efanayo xa uzibona kwidesktop yakho.
Uyilo oluphezulu kunye nezixhobo
Iphaneli efanelekileyo ngokufanelekileyo, ngenkangeleko efanelekileyo yemveliso
Amava emultimedia elungileyo kakhulu
Unxibelelwano oluphezulu kunye nokudityaniswa
Ulwazi malunga nobunzima kunye nobukhulu abukho
I-SmartBar ifuna ukufunda
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Huawei Mate View, iqela lempumelelo eliphucula imveliso yakho [Uhlalutyo]
I-Sage kunye neLibra 2 zii-eReaders zeBluetooth ezintsha zeKobo